बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा भएमात्र लगानीकर्ताहरुले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् : चन्द्र ढकाल « GDP Nepal
डा. रुद्र शर्मा र सिए युद्ध ओलीद्वारा लिखित पुस्तक ‘बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज र आर्थिक विकास’ बजारमा आएको छ । यसै साता एक कार्यक्रमका बीच सो पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो । सो पुस्तकमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुनका बारेमा विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ भने सो कानुनलाई समाज र आर्थिक बिकासमा जोडेर विश्लेषण गरिएको छ । पुस्तकका लेखकमध्ये डा. शर्मा संविधानविद्समेत हुन् भने ओली पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
व्यवसायीका समस्या हल गर्न सरकारसँग राहत कार्यक्रमका लागि पहल गरिँदै : ढकाल
महसुल नबुझाउने २९ ग्राहकको लाइन काटियो
विनियोजन विधेयक प्रक्रियाअनुसार नै पारित हुने